Tanga Kutora Kwako Blog Mazuva Ano! | A Couple for the Road
Kugovera mabhuku kunowanikwa kupfuura vafambi vekufamba, vangangodaro, kana avo vanoda kutsvaga zvinotevera kuburikidza nekufungidzira nekupikisa pfungwa dzevanhu. Kuburitswa kwemashoko, chaizvoizvo, kwakava chikamu chakaoma chebasa chero ripi zvaro rezvemabhizimisi uye chiito umo kunyange makambani akaenzana neBurune akabatana. Yakava nzira iyo chero bhizimisi chero ripi zvaro, zvisinei kuti rakasarudzwa kana rakataridzika, rinobatanidza uye rinozivisa vateereri vavo. Asi, unoziva here kutanga bhuku rekufamba?
Kune vafambi, mabhogiji anoonekwa sekupinda-nzvimbo kupinda munyika yekushanya kusingaperi, kubhadhara-kwezororo, kubhadhara, mari, nekuzivikanwa. Ichokwadi ndechekuti kutanga bhakisi rekufamba anogona Iva zvose zvezvinhu izvi, asi iwe unofanira kuziva zvauri kuita.
Pane nzira mbiri dzekuwana zivo iyoyo; zvichida kudzidza nekuedza uye kukanganisa (izvo zvinogona kutora nokusingaperi), kana kushandisa ruzivo rweumwe munhu anenge atoita zvikanganiso, akadzidza kubva kwavari, akawana bhaibheri ravo kubva pasi, uye akatanga kutsika iyo nzira yekuziva.
Ndiyo apo mutungamiri uyu anouya.
Apo chekutanga yedu yakatanga kurarama munaDisemba, 2016, isu takatotanga A Couple for the Road muna May wegore iroro. Takaita zvikanganiso pakutanga, mhando yezvikanganiso iwe unogona kuwana kubva, asi zvikanganiso zvinodhura nguva nemari hapana-kwete. Kudzidza kutanga bhuku rekufambisa kwedu ndiro chinhu chakanyanya kuoma kana chimwe chedu chakamboita - nechokure. Dai takaziva izvo izvo zvatinoziva iye zvino, uye zvatichakuudzai, tingadai takachengetedza zvakawanda zvekutambudzika.
Kufambisa mabhuku kwakatipa rusununguko rwekufamba nenyika kakawanda, kuti tibatane nevanokurudzira, kusvika kuva kunokonzera, uye kuva nezwi mumutambo umo tine chido. Inogona kuita zvakafanana kwauri kana iwe wagadzirira kutanga!
Unoda kutanga wako here?
Iyi tsanangudzo yakajeka ichakuratidza kunyatsoita kwatinga kufamba bhagi rako rekufamba, nenzira inokurumidza, yakajeka nzira inogoneka!
Danho 1: Sarudza Zita
"Chii chiri muzita?" Zvakanaka, pakuburitsa, chinhu chose iri muzita. Usandibata zvisiri izvo, iwe hausi kungotora zita rakanaka uye kutarisa zviuru zvekuenda kune yako yepaiti, asi zita rakaipa rebhuku rinogona kukuputsa iwe usati watanga. Zita rakashata rebhugu rinogona njiva-kureva iwe mune niche iyo iri nguva pfupi, inokuchengetedza kubva iwe uchive wakakosha mumitsheni yekutsvaga, uye kunyange kutendeuka avo do kukuona iwe uripo. Saka, iwe unouya sei neshoko guru rebhulogi iro mabasa, uye vacharamba vachishanda? Heano mamwe mashoma mashoma.
Funga kwenguva refu
Kuchinja bhaibheri rako zita pasi pemutsara kunoshamisa zvikuru, uye chinhu chinofanira kudziviswa sehosha. Iwe unoda kusarudza zita richaita senjere yakakura kwauri nhasi sezvazvichaita makore gumi kubvira zvino.
Somuenzaniso, takaona mabhuku akanyorwa navanhu mumakore makumi maviri kana matatu makumi matatu ane mazita ehuwandu hwebhuku rakadai se "Twenty-Something Something". Usadaro. Chii chinoitika kana iwe ukachinja 30? Kuburitsa kwako kwebhurogi hakuzovi nekunzwisisa zvakare, sezvo zvichange zvisingaitiki kune iwe uri muupenyu.
Usatumidza bhalogi mushure mokugara kwaunogara kana kuti kwauri kubva kune iwe kunze kwekunyora iwe zvakananga munzvimbo iyoyo - uye uronga kuita saizvozvo zvachose. Kana iwe uchizvikudza wekubva kuOhio, asi iwe unonyora nezvekuenda kwenyika yose, usatumidza blog yako "ohioguytravels.com".
Tracy akauya neA Couple for the Road, uye yakakurumidza kujekesa isu tose. Tanga tichida kutanga bhaji rekufambisa, uye tine branding iyo inogona kutinakira isu zvakare mu60s yedu sezvazviri ikozvino mu30s yedu. Nhasi, tinorarama kuSouth Florida uye tinofamba munyika. A Couple for the Road inonzwisisika. Makore makumi matatu kubva ikozvino, pasinei nokuti tiri kurarama kupi, zvicharamba zvichinzwisisika.
Dzivisa Numeri Uye Zviratidzo
Mutemo wakajeka apa - kana iwe usingakwanisi kuudza mumwe munhu zita rebhulogi uye uite kuti vanyora pasi zvakarurama katatu pane gumi, usashandise zita iroro. Ngatiti iwe uri munhu akareba kwazvo ane blog, uye iwe unotumidza blog yako 7-Foot Traveler. Paunondiudza zita rebhulogi, ndine mibvunzo yakawanda.
Ndizvo "7" kana "zvinomwe"?
Ndiyo "tsoka" kana "ft" here?
Pane chekufungidzira pakati pe "7" uye "netsoka" here?
Hafu yezwi rako-ye--mumigwagwa hauzomboiti panzvimbo yako.
Dzivisa Kupera uye Kunyanya kushandiswa Mashoko / Mitsara
Mashoko akadai se vagabond, nomad, aridic, adventurous, kufamba-famba, uye kufamba / vafambi vave vakanyanyisa kudarika munzvimbo ino iyo kushandiswa kwaro mubhuku kunenge kuchena-mhere. Mukuwedzera, pane mave nemablogiki akakomberedza kwemakore gumi kana kupfuura ayo akatora mazita aya uye akaaita awo, saka anoita kuti iwe uone seasina vanhu.
Nomadic Matt ane guru rekufamba blog munyika, saka iwe unofunga kuti ani nani achabata hanya kana uri kanadic Jeff? Nyanzvi yeVagabond ndiyo inonakidza chaizvo inofadza blogger muAmerica. Unofunga kuti Smart Vagabond ichave yakasiyana newe here?
Tsvaga pfungwa inoshanda kwauri, uye uve wekutanga kuita kuti. Zvinogona kutora nguva shomanana uye kuedza, asi zvakakosha.
Itai Kuti Ichive Chisingakanganwiki
Mashoko mashomanana anoyeukwa zvikuru, sezvinongove akachenjera kuchinja kumashoko anonyatsozivikanwa. Vanyori vane tsika yekuda kuratidza kuti vakachenjera sei zvose nguva, uye kazhinji izvi zvinotungamirira kukudarika kwezita rekusarudza. Iwe unogona kuva neruzivo rukuru, asi rega izvozvo zvinosangana mukunyora kwako. Usatumidza blog yako "euphoricallyoptimistictraveler.com". Heino mutemo mukuru wechigunwe:
Kana zita rako rinonzwika ngwara, zvichida zvakaoma zvikuru. Kana zvinonzwika akachenjera, uri munzira yakarurama.
Funga nezvemafirimu ekare pamusoro pekufamba, uye mitsetse yakakurumbira mavari. Funga nezvezvinyorwa zvekufamba. Ona kana iwe unogona kuchinja iko zvishoma. Gadzira iwe pachako spin pane chimwe chinhu chinogona kurira vanoziva kune mumwe munhu, asi kwete kunyanya kushandiswa.
Usati wagadzirisa zita, edza pfungwa shomanana kune vanhu vaunoziva uye kuvimba. Kukoka kuti vakuudze chokwadi. "John, kana izvi zvose zvinonwisa, ndiudze kuti vanomwa. Iwe unofungei nezve ... "Kana zvisiri kutora uye kufadza kuvanhu iwe ziva, saka zvirokwazvo hazvizovi kuvanhu regai munoziva.
Kana uchinge waine chimwe chinhu chinonzwika zvakanaka, unonzwa zvakanaka, uye unowana mhinduro yakanaka kubva kuvanhu waunoziva, inguva yekuenda kuChitatu 2.
Danho 2: Sarudza Kubata kweBlog yako
Kusarudza Hondo kunoreva kusarudza nzvimbo iyo data yako yose yeblogiti inogara. A blog yakafanana kune webhusaiti yega yega, sezvo inosanganisira zvizere zvemarudzi akasiyana ehupenyu. Izvi zvinouya nenzira ye data, kombiyuta yekombiyuta, ruzivo rwemasvomhu, mapikicha, zvinyorwa, uye mafaira anosanganisira webhusaiti yako. Aya mauto anoshandisa sevhareta, kazhinji mune imwe nzvimbo huru yedata iri azere yevashandi ava, kubata nekuchengetedza yese data iyo vatengi vavo vanoshandisa nekuunganidza. Kana mumwe munhu akapinda muwebsite yako, vari kudhonza mashoko kubva kumaseva aya nenzira yavakarongeka. Unonzwisisa?
Kubata kunotora nzvimbo yakawanda, uye inenge ichidhura uye inoda ruzivo rwakadzika rwehutano kuzvitoro-rega pane wega yako. Nenguva isipi, kune makuru makumi emamiriyoni anopa maitiro ekugamuchira vanhu avo zvakare kukubvumira kutenga iyo URL yewebsite yako (zita rako renzvimbo inoenda).
Chikonzero Nei Uchida Kuvaka Yenyu Yacho MuShokoPress
Tisati tasvika pakukurukurirana pamusoro pebasa rekukoka iro tinoshandisa nekukurudzira, pane nyaya inokosha zvikuru iyo inopesana nevakawanda vema blogger vanozoguma vachivabhadhara nguva, mari, uye kushungurudzika - ndiko kuti, if ivo vanozombozviona kukanganisa. Kana vasina kudaro, mabhulogi avo haasviki kuti abve pasi, uye nekufamba kwenguva kushungurudzika kwavo pamusoro pokushaikwa kwekukura kuchavatungamirira kuti varege. Zvinoitika nguva dzose. Vachegi vanotanga nzira isina kururama, nzira inotungamirira kune imwe nzvimbo, vanokundikana kuti vazvione, uye pakupedzisira vanokundikana nekuda kwekanganiso nyore ivo vangadai vakaruramisa.
Saka, chii chakanyanya kuita? Chii ichi chikamu chinokosha chemashoko?
VAKA SITE YAKO MUMUNYORI !!!
Ichi ndicho chikanganiso chatakaita kare, izvo zvakaita kuti tive nemarara akawanda, mari, uye zvigadziri kwatiri. Isu tava kuda kuregera, chaizvoizvo, nokuti takaona kuti taizofanira kutanga kubva kubva pakutanga.
Apo takatanga A Couple for the Road, takanga tava kutamba mawebhuki maduku mashoma paGoDaddy uye Wix. Zvine nyore kwazvo kuisa-up web site dzinokosha ne, dzinoratidzika sedzimba dzisina kutengesa (dzinoti: hadzisi dzisina mari), uye zvinonzwisisika zviri nyore kune mawebsite edzimba ayo achavimba zvikuru neshoko remuromo remugwagwa.
Zvisinei, kana uchida chero motokari kubva kuGoogle, kana chero imwe injini yekutsvaga, unofanira kushandisa WordPress. Chikonzero chikuru ndiyo nzira iyo WordPress nzvimbo dzinonyorwa maererano newebsite seGoDaddy kana Wix. Apo takatanga A Couple for the Road muWix, takaona kuti yedu organic search traffic yakaramba iripo zero pashure pemwedzi mitatu. Zero, sezviri, kwete mumwe. Sezvatakaongorora chikonzero chacho, takawana kuti code muShokoPress-based sites yakawanda ronda pane dzimwe nzvimbo seWix, zvinoreva kuti zviri nyore kuverenga nemutambo usina kukodzera "filler" code.
Muchidimbu, zviri nani kombiyuta yekombiyuta yakagadzirwa nevanokudziridza zviri nani pane teknolojia yepamusoro.
Kuti nzvimbo yako yekutsvaga iratidze muGoogle Search (kana Bing, kana Safari, kana chimwe chinhu), injini yekutsvaga inoshandisa "bots" kuti icheke nzvimbo uye iverenge zvigadzirwa. Tsvaga injini bots (zvikurukuru, automated coding zvikwata zvinotumirwa kunyoresa masayiti uye kunyora mashoko) haagoni kuverenga coding clunky. Mune mamwe mazwi, kana ikaedza kukwidza nzvimbo yakavakwa muWix, kazhinji haigone kuverenga coding iyo inogadzira zviri mukati. Mhedzisiro?
Kana nzvimbo yacho yakanyatsonyorwa coded, bot haikwanise kukwira mashoko.
Kana bhoti isingagoni kukwira ruzivo, haigone kuchengeta.
Kana iyo isingagoni kuchengeta mashoko acho, haikwanise kunyora mashoko acho nejini yekutsvaga.
Kana injini yekutsvaga isingagamuchiri ruzivo, iyo anorega nzvimbo yacho sekuti haisipo.
Kana izvi zvichiitika, hauzotongotori chero magetsi. Zero. Zilch. Nada.
Saka huwandu hwewebhu hunovakwa muShokoPress, nokuti coding yakaonda uye iri nyore kutamba ne search engine bots. Uyezve, zvinoshanda muShokoPress zvinyorwa zvikuru zvikuru kune nzvimbo dzakadai seWix kana GoDaddy.
Zvisinei, WordPress ndeye kwete a web host. Hapana mavhavhari paSpaPress station iyo inobata zvinyorwa panzvimbo yako. Pane, zvisinei, iyo inonyanya kuzivikanwa muInternet webhupu iyo inobatana neShokoPress kuita sarudzo yekugadzira nekuvaka webhusaiti yakatendeseka iyo inokwanisa kuwana migwagwa crisp uye nyore.
Bluehost - Our Recommended Hosting Provider For Beginners
Apo takasarudza kuita shanduko kubva kuWix, taita mugove yekutsvakurudza. Nepo kune vakasiyana-siyana vanogadzirisa avo vanozivikanwa, vazhinji vanovakirwa nzvimbo dzekusiyana kwakakura uye yevheji yepamugwagwa. Nzvimbo yakakura yewebsite yako inowanikwa, uye iyo yakawanda yemotokari yaunogamuchira, kunyanya kunetseka kunowanikwa pawebhu web host, izvo zvinoreva iwe unoda kusarudza mutambi mukuru uye wakasimba.
Zvisinei, mupi wepamusoro (mune maonero edu) kune rimwe blogger itsva BlueHost. Tichiri kuBluHost mushure megore, uye kushanda kwavo, basa revatengi, uye mari yakave yakakosha! Gare gare pasi mutsetse tichafanira kuchinja kune rimwe remabasa makuru, asi akawanda acho anotora mabloggi makuru kubva kune $ 200 kusvika ku $ 1,000 per mwedzi zvichienderana ne "mutoro" wewebsite pane seva. Izvo zvaunosvika pachiyero ichocho, zvakadaro, zvakakosha.
Kutanga kunze, zvisinei, zvirokwazvo kuenda nayo BlueHost. Kunyora zvinoshamisa zvinoshamisa, uye pano pfupiso yekuti ungazviita sei!
Step 1 - Kushandura bhodhi yebhuruki inoti "tanga ikozvino", nemuseve unotarisa kumufananidzo.
Step 2 - Sarudza hurongwa hwako.
Nhanho 3 - Shandisa "ruzivo rutsva" kutsvaga kuti uoneke kuti zita renyu rekugara riripo.
Step 4 - Wedzera chero humwe humwe zvinhu, uye shandisa WordPress kunharaunda.
Vamwe vanotenda mukutenga kuchengetedzwa kwevamwe, asi Google yakataura pachena kuti sarudzo yavo inofunga kuti kana kuti kwete chirongwa chiri "chega" pakuisa dhigirii kuvimba, ne "private" domains vachitarisa sekuti vane chimwe chinhu chokuvanza. Zvisinei, kana iwe unotya nezvezita rako nekero (iwe unogona kushandisa PO), paunowanikwa pachena pawebsite, zvakanaka kukuyeuchidza kuti izvi zvingangodaro zvikamu zviduku kune Google ggorithithm.
Kana wangove wakagadzirira kudhinda bhokisi re "Faka WordPress", wakagadzirira danho 3.
Danho 3: Isa ShokoPress
Chimwe chikonzero iwe unoda kushandisa WordPress kuburikidza nemukuru, saBlueHost, ndeyokuti webhusaiti yako ichava zvechokwadi yako. Iwe uchava ne URL yakasiyana, yakadai se "acouplefortheroad.com", pane "acouplefortheroad.wordpress.com".
Uyezve, kuenda zvakananga kune WordPress.com zvinoreva kuti hausi wewebsite yako, WordPress inoita. Sezvo zvakadaro, iwe hauna kodzero yekutengesa kushambadzira pawebsite yako, kuisa plug-ins (iyo ichave yakakosha gare gare), zvinyorwa zvinyorwa kana kushandisa Google Analytics kuyera saiti yako.
Kana ukangotarisa pa "Faka WordPress" bhatani, sezvaratidzwa pamusoro apa, uchatungamirirwa kuburikidza nekushandura nyore nyore pa BlueHost cPanel yako. Apo inokubvunza iwe kwaunoda kuisa iyo, sarudza nzvimbo yako (ex: http://acouplefortheroad.com).
Kana ukangosungirirwa, iwe unogona kuwana Shoko rako reDashibhodha nezita rako rekushandisa uye password, izvo zvose zvichatumirwa kune e-mail yawakashandisa panguva yekunyora. Dashboard yako inotarisa sechinhu chakareruka chemufananidzo uri pasi apa, iyo yatino dashboard yedu.
Kana wambosvika padashboard yako, wakagadzirira kutanga kuvaka bhurogi rako!
Danho 4 - Kudzidza Nzira Yokushandisa WordPress
Izvo zvinhu zvakawanda zvinotyisa paunotanga neShokoPress, asi hazvidiwi. Nokuda kwehupenyu hwePeoplePress saMambo wekuvaka webhusaiti, kune zvakawanda zvidzidzo zvinowanikwa paIndaneti kune chero mibvunzo yaunayo. Uyezve, hurukuro dzaunogona kushandisa neShokoPress dzichava nemapoka ekutsigira ayo anobatsira nedzimwe nyaya. Chimwe chezvinhu zvakatendeseka zvikuru zvataive nazvo maererano nekupindura mibvunzo ndeye YouTube, apo mavhidhiyo mavhiri anobhadhara chero mubvunzo unogona kuva nawo pamusoro pokuti ungatanga sei kuvaka nzvimbo yako.
Nenguva isipi, WordPress ine Nhungamiro yevashandi kuti ungatanga sei. Chikamu chakanaka ndechekuti zvakakwana zvachose kushandisa!
Iwe unoda kushandisa nguva inofamba uchienda kune dashboard yako, kushandisa kushandiswa kumabasa akasiyana-siyana akadai sokuwedzera mapeji, kugadzira chinyorwa, uye kuisa mhizha dzakadai sePSs, mavhidhiyo, uye mapikicha.
Danho 5 - Kusarudza Chinyorwa
"Nyaya" yako ndiyo inonzi skeleton iyo iyo nzvimbo yako ichavakwa. Saka kuti vanhu havafaniri kutanga kubva pane chimwe chinhu pakuvaka nzvimbo, pane chaizvo zvuru zvemashesi aya anokwanisa kusarudza kubva.
Dambudziko guru riri mukusarudza pakati pehurukuro yakasununguka, inowanika zvakananga kubva pa WordPress yako dashibhodhi, kana kubhadhara unyanzvi webhutidzo yehu blog. Kana iwe wakanyanyisa nezvekuita mari newebsite yako, tora unhu hwemhizha.
Izvi zvinyorwa zvinowanzobva kune $ 35 - $ 100, uye vamwe vari kumusoro-kuguma vanosvika kusvika $ 150. Iko inowanzobhadhara nguva imwe chete, zvisinei, uye kana iwe uine faira iwe unogona iwe sezvaunofarira (kunyange pane dzakawanda nzvimbo).
Takatarisana nemitauro mishomanana yakasiyana, asi iyo yatinenge tichishanda ndiyo inonzi StudioPress, uye inonzi Refined Pro. StudioPress inonyanya kushandiswa kwezviuru zvemashoko, mazhinji ayo anoshandiswa nemamwe mawebsite makuru uye mabloggi.
Zvatinoda nezve StudioPress ndezvayo chakanakisisa kushandiswa kwevatengi uye nyore kwekushandisa. Pano, unogona kubvunza pamusoro pekugadzirisa zvinhu kana kukanganisa nyaya, uye rubatsiro runokutungamirira kuburikidza nekuita kuti nzvimbo yako ione sezvauri kurota.
Nhanho 6 - Upload Plugins
WordPress plugins ndeyechitatu-party apps dzinobatsira kuvaka purogiramu pabasa pasina kuwedzera zvinyorwa zvinyorwa kana kupinda maefaira chaiwo ewebsite uye nekubata nebasa rakakura. Iwe unongotumira purogiramu yacho, iite uye ichinje zvirongwa sezvaunoda. Ndizvo!
Plugins haigone kubatsira nemibvunzo yakawanda, kusanganisira kuumba e-mail list, mobile-friendly viewing, database optimization, SEO, spam kudzivirira, uye site rekudzokera-up. Heano mazita mashomanana atinoshandisa uye anokurudzira.
Akismet- Iyi filera ye spam pane chikamu chako chemashoko, uye inoshanda chaizvo. Pane zvinyorwa zvishomanana izvo zvine snuck kuburikidza nemurindiro, asi iwe unenge uine sarudzo yekubvuma kana kusavhiringidza mashoko.
All-In-One SEO- Iyi ipirgi-inokosha yekugadzirisa zvikamu zvako zveGoogle kutsvaga. Iwe uchagadzira meta tags, tsanangudzo, shandisa sitemaps, uye kunyange kutanidza yako nzvimbo neGoogle Analytics.
BackupGuard - Haugoni kuchengetedza nzvimbo yako yakawandisa. Shoko reShokoPress rakachengetedza mazwi ose awakambonyora, uye kana blog yako yatanga kukuita iwe madhora mashomanana, iwe ungava makungu kuti usachengetedza mafungiro evamwe nguva dzose. BackupGuard inozviita zvakakwana. Nekwanisi yekugadzirisa zvipembenene, haufaniri kunetseka pamusoro pekuzviita nemaune (kunyanya kubatsira kune zvakanyanya kukanganwa pakati pedu). Panewo sarudzo yekuisa mabhakkusi kuDropbox, Google Drive, uye mamwe mabasa ekuchengetedza gore, kuve nechokwadi kuti kana zvakanyanya kuitika, data yako ichachengeteka.
Easy Social Shamwari Tsamba- Nhaurirano dzehupfumi dzehupfumi dzehuwandu hwemashoko ako. Kushandisa izvi zvinobatsira kuparadzira zvinyorwa zvako kwose kwose!
Relevanssi - Kunyange zvazvo WordPress ichiita zvinhu zvizhinji zvakanaka, izvo zvisingabatsiri kuwedzera kutsvaga kwekuita panzvimbo yako. Relevanssi inogadzirisa izvi uye inopa vaverengi vako mhinduro yakarurama kwazvo paunotsvaga pawebsite yako.
Sumo - An app iyo inobatsira kusika pop-ups dzakasiyana-siyana, masiki ekugamuchira uye mashizha e-mail-signs ups uye kudanidzira kuzviito. Uyezve, Sumo ine ma modules ekugoverana kwehupfumi uye kunyange kugoverana kwemufananidzo!
WPtouch- Kana wakaenda nehurukuro yakasununguka kana inokosha, iwe uchada WPtouch kuti iwe webhusaiti yako ifambidzane. Yakawanda--kubhadhara zvinyorwa zvatove zvinofambisa kushandiswa.
WP-Ongorora- Inokubatsira kuti uchengetedze WordPress database yako yakachena uye ine utano, iyo inovandudza huwandu hwehutano hwekushanda nekukurumidzira (iyo ichinhu chimwe muhutano hwehutano hweGoogle).
Nhanho 7: Kubuda Kunzvimbo
Kune matanho ekubudirira anodiwa paunotanga mabhurogi - kunyange usati wasunungura kutanga kwako! Iko pano kuti iwe ugadzire nheyo yakasimba uye yakasimba kubva pane nzvimbo yako ichakura, saizvozvowo imba inoda nheyo yakasimba isati yava yakazara yakavakwa.
Gadzira Basic Site Structure
Funga nezvekuti unoda sei nzvimbo yako kuti ione, uye kunyanya, mapeji aunoda kuumba. Iwe unogona kukwereta pfungwa kubva kune vanobudirira vanofambisa mafambiro kana kuenda kunhare, asi nzvimbo yako inoda mamwe mapeji anozivikanwa pane rimwe bhuku rakabudirira.
Mauya - Iyi ndiyo webhusaiti yako ye "handshake". Inofanira kufadza uye kuudza muverengi, uyewo kuva nerwendo rwakajeka runovatungamira kuti vadzike mukati me site yako. Iyi ndiyo peji apo iwe uchange uine mvumo yekuita zviito zvakanyanya kuiswa, kusanganisira nzira yekufamba nayo kubhuku rako rekufambisa, pamusoro peji peji, mapeji ekumhanyira, nzvimbo yekuongorora, uye chero chimwe chinhu chaunowana chinokosha. Nguva dzose chengeta kuti uone kuti peji rako rekugamuchira rakanaka rinoratidzika zvakanaka pane zvose desktop uye mobile versions.
Travel Blog - Iri ndiro peji apo mitsara yako icharatidzwa, uye nemumwe mupiki mukuru wezvinyorwa kune zvakawanda zvirongwa zvekuratidzira. Ita kuti zvive nyore kufamba nekutora muverengi pasi peji rako. Iwe unoda kuti ivo vapfuurire kusvikira vawana chinyorwa chinovafarira, uye nzira yakanaka yekuita izvi ndeyokuumba mabheji (anowanika pamisoro mizhinji), kana kuti kudana kune chiito chinoramba chichideredza ziso "kuderera".
Nezvedu - Iyi ndeimwe yemapeji akabatanidzwa zvikuru pane chero bhulogi, nokuti vanhu vanoda bhagi yako vanoda kuziva nezvekakabva. Iva nechokwadi chokuti zvinonakidza uye zvinodzidzisa, uye zvakarongwa nenzira iyo muverengi anonzwa sekuti ane pfungwa yekuti iwe ndiwe ani kana vakaiverenga.
udza mashoko - Google inosanganisira mapeji ekubatanidza mumagariro avo, uye iwe unoda kuve nechokwadi kuti verenga vako vanogona kusvika kwauri. Izvi zvinowanzove peji yepamusoro, asi inogonawo kunge yakabatanidzwa nenyaya yevhidhiyo nevashambadzi vangave vanofarira kushanda newe!
Inoshanyira - Kana uchitanga bhajikopo rekufamba, iwe unoda kuti vaverengi vako vazive zvaunoda kuziva. Kune nzira dzakawanda dzekugadzira peji ino sezvo pane mabhuku paIndaneti, saka tora pfungwa huru pamwechete, kuwana mapu akanaka plugin (tinoshandisa Interactive Maps), uye tive nechokwadi chekushandisa izvi se peji kuti tibatane kune zvinyorwa zvine chokuita nenzvimbo idzodzo.
Privacy Page - Iyi ndiyo yemhando yemagwaro evhidhiyo yemvumo yekuita kuti vanhu vazive kuti mitemo inoshanda pane yako yepaiti ndeyekuti, iwe unoshandisa kuki, nezvimwewo. Unogona kuwana kubva mubhokisi maenzaniso paIndaneti.
Copyright Page - Ndiyo peji yepamusoro inoita kuti vanhu vazive kuti iwe uri pabasa iri uye kuti urege kuba. Iwe unogona kuwana kubva mubhokisi maenzaniso paIndaneti.
Pane mamwe mapeji akawanda aunoda kuumba, asi nguva icharaira zvaunoita. Tiri kukwira makumi manomwe mapeji panzvimbo yedu yepaiti, uye ramba uchiwedzera kana tichiona zvakakodzera. Kana iwe unesimba rakasimba, saBlueHost, izvi hazvifaniri kuisa dambudziko kumabasa.
Chero ibhigi rimwe rakabudirira matombo social media. Kunyange zvazvo pane zvakawanda zvingasarudzwa, uchaona kuti chimiro chebhurogi rako chinowedzera zvakawanda pane mamwe maitiro pamusoro pevamwe. Kwatiri, Instagram ndeyehombe huru uye Facebook. Kunyange zvazvo tine chimiro chakanaka pa Twitter, chibvumirano chacho kazhinji chinoderera zvishoma pane Facebook kana Instagram.
Ita chokwadi kuti ugadzire nhoroondo yeGoogle + kugovera zvinyorwa zvako. Google inoda Google, uye kuva nenyaya dzako pano kunobatsira kuwedzera nzvimbo yako munzvimbo yekutsvaga.
Zvichienderana nechinoshandiswa pane niche yako, mamwe maitiro anosanganisira:
Chero chipi zvacho chaunosarudza, iva nechokwadi chokuti usazviparadzira iwewo zvakanyanya pakutanga. Kana iwe ukawana ruzivo mune imwe svikiro (Facebook, somuenzaniso), unogona kushandisa vateereri vako vanokura ipapo uye uchitaurire kune dzimwe nzvimbo dzako dzehupfumi zvehupfumi kuitira kuti dzikure mune zvehupenyu, kunyange zvishoma nezvishoma.
Vanhu vanoona, uye iwe unoda kudzidza kudzidzisa sei mafananidzo akanaka mu blog yako. Izvi zvinogona kuva zvako, kana izvo zvinoshandiswa sePublic Domain kuburikidza neFlickr "Creative Commons". Unogonawo kusarudza kutenga mifananidzo, asi izvi zvinowanikwa kwazvo inodhura, inokurumidza.
Kuumba yako Yokutanga Post
Kana wangosimbisa nheyo iyi, ikozvino yava nguva nyora. Iwe unogona kutumira chinyorwa pane chero chinhu, uye vakawanda vanoblogi vanoona kuti iri kubudirira kunyora chirevo pamusoro pevanaani.
Iwe unoda kuti vaverengi vako vazive pamusoro pako, hongu, nekunyora bhurocha rinokurukura chinangwa uye chinangwa chesaiti, uyewo mamiriro ako ezvinhu ose anogadza simba uye anoudza muverengi kuti nei vachifanira kufarira.
Danho 8 - Maitiro Akanakisisa Kubva Pazuva Rimwe
Kana uchinge wava nekutanga yako yekugadzirira kuenda, tanyoresa Nomadic Matt's course, uye watanga kuisa basa mumagariro evanhu, yakatova nguva yekutanga kuita nekufunga sekubudirira kweblogger.
Ichokwadi kuti iwe unova izvo zvaunofunga nezvezuva rose, sezvakanyatsoratidzwa nevanhu vakawanda vakangwara kuburikidza nenhau, uye hazvisati zvamboitika kare kuti vatange kuita nekufunga seglogger. Nhungamiro yemafungiro ako ichakutungamirira zviito zvako, uye zviito zvako zvichakutungamirira zvaitika. Pakupedzisira, ndiko kutenda kwako nekuzvipira kwako, kunotanga nemafungiro ako, izvo zvinotarisa zvinotora kukumisa iwe.
Kubatana Nevane Influencers Uye Vamwe Vachigadzirira
Zvemagariro ehupfumi ndiyo chimbo chakanakisisa chekubatana nevamwe vema bloggers uye vanopikisa. Mhinduro pamusoro pezvinyorwa zvavo, vagovana zvavanoda, uye vavepo mumharaunda yavo. Be chaizvo kushingaira pamagariro evanhu, asi nechinangwa. Iva nechido chekubatsira vamwe vanhu nekubatsira kuvasimudza, uye iwe unopedzisira uchisimudza uchikwirira iwe pachako.
Kutarisana Nenguva Dzakaoma
Sezvatareva, izvi zvakaoma. Kana zvaiva nyore, munhu wose uye munhu wose aizenge achiita madhora emadhora pagore paaifamba pasi.
Hazvisi. Zvakaoma. Zvakaoma zvikuru.
Chii chichazopedzisira chasarudza kubudirira kwako kana kukundikana kuve kwako kuda kuva sponge, kuzarurirwa kubudirira, nekukundikana. Kukundikana kuchakudzidzisa zvidzidzo, uye hazvigoneki mukubhombwa. Pachava nemakamuri iwe unofunga goridhe, uye ivo vachaputika. Zvirongwa zvaunoda nhasi zvicharatidzika zvakashata kwauri mumwedzi mitatu. Iwe uchaenda vhiki, zvichida kunyange mwedzi pakati pekutaura kana "kutamisa bhora pasi".
Hapana chimwe chezvazvo zvinokosha. Kutsungirira kwako kunoita, uye ndizvo ndizvo zvichagara zvichikutungamirira kusvika kune imwe nguva inobudirira kubudirira. Nguva iyo, pavanouya, vanonzwa zviri nani kudarika iwe unogona kufungidzira. Kungofanana nemashure iwe hauna kuda iyo yakaenda nehutachiona. Izvo zvirongwa zvausina chokwadi pamusoro pazvo zvinodonha kukunda kwako uye zvinokurudzira kubatanidzwa. Iwe uchafamba mazuva ari mumutsara, masvondo mumutsara apo unonzwa sokuti haugoneki.
Nguva dzose shanda kune dzimwe nguva, uye ufare nazvo pavanouya. Sezvo nguva ichienderera mberi, kushivirira kwako kuchapiwa mubairo.
Danho 9 - Ita Kuti Unakidze
Kugovera mabhurogi kwakaoma, hongu, asi funga nezvezvaunowana kuti uite? Iwe unotanga kuchinja. Inspire. Kurudzira. Iwe unosvika pakuzarura nyika kune vanhu vavasina kumbofunga kuti vanogona. Kana kunyange munhu mumwe chete achifambiswa nebasa rako, zvakanakira sei izvozvo?
Iye zvino funga nezve 100.
Funga nezve 1,000.
Pachava nezvikomo nemipata mune izvi, izvo zvinofanira kuva nechokwadi. Asi, ramba uchiyeuka kuti nei uri kuita izvi, uye mukana wakasiyana-siyana uri kuunza hupenyu hwekufamba kunyika. Kana imwe nguva zvinhu zvichibviswa, basa racho rakakosha. Pamwe munzira, yeuka izvozvo uye fungidzira uchibudirira. Kunyanya kukosha, zvisinei, fara nazvo.
Ongorora nzira, uchiziva kuti unogona kuchinja chero chinhu chisingashandi. Usatya kutya kana kuedza. Chinonyanya kukosha, usakanganwa kuva iwe.
Apo kubudirira kunoitika, zvichave nokuti wakaita kuti zvive zvinonakidza - kwete chete kune muverengi, asi iwe pachako.
Zvino, enda uite kuti zviitike!
Category: Most Popular, Travel Blogging Tags: bluehost, kufamba blogging, Wordpress
← Nzira Yekutengesa Kubva kuAmaAma In South Africa
10 Mazano Okutevera Paunenge Uchienda kuBhutan kweKukutanga Nguva →
2 Comments pamusoro "Nzira Yokutanga A Kutora Blog"
Izvo zvinhu zvakanaka mazano! Ndaifanira kunge ndaiverenga izvi pandakatanga bha blog yangu, kunyanya kusarudza chikamu chezita! Ndichagovana neshamwari dzangu.
Thanks Zascha! Ndinofara iwe waifarira mberi!